शेरबहादुर देउवा वर्वराउनुका कारण
कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाई मत ल्याउँछन् र संविधान संशोधन गर्छन् भन्ने कांग्रेस नेताहरुको स्वीकारोक्ति उनीहरुमा देखिएको हारको पूर्वाभाष हो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको दैनन्दिनको अलाप विलाप छ– ‘एमाले माओवादी सहकार्यले उनीहरु दुईतिहाई सिट जित्छन्, तानाशाही ब्यबस्था ल्याउँछन्, त्यसपछि चुनावै हुँदैन, एकदलीय ब्यबस्था आउँछ, रुन पाईंदैन ।’ विद्यमान संवैधानिक प्रणालीमा चुनाव जितेर सरकार सञ्चालन गर्दा कांग्रेस नेताहरुले भनेजस्ता कुराहरु हुन्छन् भनेर पत्याउन सामान्य नागरिक तयार छैन । बरु उनीहरुका यस्ता वर्वराहटले कांग्रेस हारको सिमान्त विन्दुमा पुगेको छ भन्ने सहजै अनुमान सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । आफ्नै सामान्य कार्यकर्ताले समेत नपत्याउने यस्ता बच्कना कुतर्क र भ्रमको पोको बोकेर राज्यको खर्चमा शेरबहादुर देउवा हेलिकप्टरमा सयर गर्दै मुलुकभर दौडाहामा छन् । उनी जहाँजहाँ पुग्छन्, त्यहाँ उनले भन्ने यस्तै प्रि–फम्र्याटेड लाइन बकेर फर्किन्छन् । सामान्य चेतनाले पनि अस्वीकार गर्ने यस्ता वाक्यहरुले देउवाको दशा मात्र दर्शाइरहेको छ, उनी हास्यका पात्र मात्र बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत् जनताका बीचमा के प्रातिबद्धता गरेको छ ? विकास र उन्नतिका के के योजना अघि सारेको छ ? आर्थिक, सामाजिक उत्थानका निम्ति कांग्रेसको नीति के के रहने छ भन्ने कुरा कांग्रेसका नेताहरुबाट सुनिंदैन । लाग्छ, कांग्रेस यतिबेला क्रान्ति मार्फत जनताले निर्माण गरेको संविधानको रक्षा र कार्यान्ययन गर्दैछैन । उ तानाशाही निरंकुश ब्यबस्थाको बिरुद्ध राजनीतिक क्रान्ति गर्दैछ, जहाँ बिद्यमान शासकका बिरुद्ध मात्र एजेन्डा केन्द्रित गर्ने गरिन्छ । कांग्रेस यसरी आफ्नै विरोधाभाषको चंगुलमा छ र उसलाई आफ्ना कुकर्मको भूतले तर्साइरहेको छ ।
माथिका यी दृष्टान्त उदाहरण मात्रै हुन् । अब आम सचेत नागरिकले मनम गर्नुपर्छ अधिनायकबादको नाइके र सर्वसत्ताबादको पर्याय शेरबहादुर हुन् कि बामपन्थी गठबन्धन ? माओवादीजस्तो अस्ती भर्खर हतियारको राजनीति छोडेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको तेस्रो दलसँग भर्खरैको स्थानीय चुनावमा सहकार्य गर्दै कम्तिमा १० वर्ष गठबन्धन गर्ने वताउँदै आएका शेरबहादुरसँग कम्युनिस्ट अधिनायकवादको कुरा गर्ने आधार के ? कम्युनिष्टहरु फुटेर बसे, झगडा गरे, एक अर्कालाई दुश्मन ठाने तिनै लोकतान्त्रिक हुने । तिनले निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न आए लोकतन्त्रमा खतरा हुने, अधिनायकबाद स्थापित हुने, बोल्न, रुन नपाईने भनेर चिच्याउँदै हिंड्नुको अर्थ बुझ्न गाह्रो छैन । जनताले दिएको बहुमत दुरुपयोग गर्दै दुई पटक लोकतन्त्र दरवारमा बुझाएका शेरबहादुर देउवाका ‘प्रि–फम्र्याटेड’ वाक्य– ‘अधिनायकवाद आउन लाग्यो’लाई अव वच्चाले पनि पत्याउँदैन । नेपालमा अधिनायकवादको खतरा छ भने राजातन्त्र फर्काउने एजेण्डा बोकेका कमल थापा र नेपाललाई एक राष्ट्र नै नमान्ने राजपासँग रणनैतिक सहकार्य गरेका शेरबहादुरको कांग्रेसबाट मात्रै छ । यतिबेला कांग्रेसमा बीपीका अनुयायी कोही बाँकी छन् भने बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषासँग साझेदारी गरेका शेरबहादुरबाट देशलाई बचाउन अघि सरुन् । शेरबहादुर त सत्तास्वार्थमा धक्का लागेकाले मात्रै अधिनायकवादको त्रास देखाउँदै वर्वराएका हुन् । उनी हिंडेको गलत बाटोबाट कांग्रेसलाई नफर्काए यिनले कांग्रेसलाई सधैंका लागि समाप्त पारिदिनेछन् । चक्रपथ डटकमबाट ।